साहित्य – Complete Nepali News Portal
साहित्य	कोमल गज़ल:- संसारमा दुक्ख विशाल रैछ
June 23, 2017	साहित्य
कोमल गज़ल:- संसारमा दुक्ख विशाल रैछ हाँसो खुसीको अनिकाल रैछ पाइन्न चाँडै हल वेदनाको लाखौंथरी क्लिष्ट सवाल रैछ छन् घात रोजै प्रतिघात रोजै साँच्चै यहाँ ज्यान हलाल रैछ खोलो हुँदै बग्दछ आँसु धारा सङ्कष्टको रास निहाल रैछ बाढी छ चारैतिर दुर्दशाको गन्तव्य रोक्ने परखाल रैछ आनन्दमा पुग्न सकिन्न कैले बाधा …
June 22, 2017	साहित्य
चर्चामा रहेको उपन्यास “मिस्ड कल” कवि, गीतकार, गायक एवं साहित्यकार सुरेन्द्र महर्जन”अमर” को चौधौं कृति हो । जुन मिस्ड कल उपन्यासको अडियो सार्वजनिक भएको छ । सुरेन्द्र महर्जन”अमर” को चर्चित उपन्यास “मिस्ड कल” धेरै भन्दा धेरै कम समयमा एक हजारप्रति बजारबाट बिक्रीवितरण भएको ब्रदर्श बुक पब्लिकेसन्सले जानकारी पनि दिएको छ …
June 17, 2017	साहित्य
-नबिन पन्त मध्यरातमा मोबाईल भाइब्रेट गर्यो। क्रान्तिसंग च्याटलाई आजको लागि बिश्राम दिदै भर्खरै मोबाईल चार्जमा राखेको थिए। कुना तिर मुन्टो फर्काएर सुतेको मलाई फर्किन पनि झन्झट लाग्दै थियो। तै पनि मनले मानेन ” ह्या ! हेरेर सुत्नु पर्ला !” आफैसंग बर्बराउदै थिए । स्क्रिनमा हेरे भाईबरको नोटिफिकेसन थियो । मन …
June 14, 2017	साहित्य
स्कटनेपाल १४ जून २१०७ : समाज सेवी तथा पत्रकार इन्दु चौधरी जीको कविता यस्तो छ : भिडियो क्रेडिट : थारुवान डट कम / करिस्मा मानन्धर को फेसबुक बाट : बुझ्नेलाई नयाँ शक्ति नबुझ्नेलाई के पि भक्ति।जो नयाँ छ त्यस्ले नयाँ कुरा आविष्कार गर्छ,प्रयोग गर्छ अनि काम लाग्न छाडेपछि टोकरीमा फाल्छ …
June 8, 2017	साहित्य
यो लेख बेलायत बाट सिता पौडेल जी ले लेख्नु भएको हो… तपाई लाइ कस्तो लाग्छ …. यस्तै कथा लेख हरु तपाई हरु संग छ भनि हामी लाइ सम्पर्क गर्न न भुल्नु होला … हेरे पछी लाइक र शेयर कमेन्ट गर्नु होला ….
June 6, 2017	साहित्य
वैधानिक रूपमै म आफ्नो लोग्नेसँग रात बिताउन गइरहेकी थिएँ । मेरै उमेरकी हसिना त त्यसो गर्न सक्छे भने मचाहिँ किन सक्दिनँ त मेरै कक्षाकी मन्दिराले पनि सहपाठी सौकतसँग गोप्य बिहे गरेकी थिई । ऊ पनि सौकतको कोठामा गएर रात बिताउँछे भन्ने हल्ला चलेको थियो । अन्त्यमा त्यो रात आयो । …
मेरो सम्झनाले कतै तिम्रो मुटु काँप्छ भने
May 22, 2017	साहित्य
मेरो सम्झनाले कतै तिम्रो मुटु काँप्छ भने मेरो तर्कनाले कतै तिमीलाई पिडा हुन्छ भने बुझिदेऊ नियती मेरो पनि उस्तै छ! जानिदेऊ जिन्दगी मेरो पनि उस्तै छ! के भूल के गल्ती छरिएका कयौँ छन् के माया के समर्पण फैलिएका सयौँ छन् दूरीलाई नाप्ने कला मायाले जान्दैन छुट्टिनुको अर्थ ‘पराई’ समर्पणले भन्दैन …
ज्यानमारा खुलेअाम छ ,निर्दाेशलाई जेल हुन्छ।
May 5, 2017	साहित्य
गजल देश चलाउने कानुन ले हाे कानुनमै झेल हुन्छ। ज्यानमारा खुलेअाम छ ,निर्दाेशलाई जेल हुन्छ। केही गर्न खाेज्नेकाे हात बाधिन्छ हरपल याहा, राम्रा काम गर्नेकाे हातमा सदैव किन नेल हुन्छ। साेझासाझा काम छाेडेर दिनरात लाईन बस्छन्, तस्करीलाई त घर घरमा जर्किनमै तेल हुन्छ। छन् काेही त ईमान्दार पनी,बनाउछन् याेजना हरू, …
महाशय ! के स्वास्नी मान्छेको पाठेघर तिम्रो विर्य बोक्ने ”झोला” मात्र हो ?
April 30, 2017	साहित्य
-सम्पदा रिजाल “झोला” हजारौं स्पर्मको म्याराथन जितेर ओभम छेडेपछी सुरु भएको हो तिम्रो बहादुरीको यात्रा ! तिम्रै नामको लालपुर्जाले मात्रै नापिन्छ मेरो पाठेघरको उचाई ! संस्कारका भुत्ते कानहरुले तिम्रै अधिकारको हेयरिङ एड बाट मात्रै सुन्छन मेरो गर्भको धड्कन ! तिम्रो स्वामित्वको प्रमाणबिना काटिएनन अँह काटिएकै छैनन प्रसबका सालनालहरु! भर्खरै जन्मेको …
April 28, 2017	साहित्य
– सञ्जय बिष्ट- आएकै बाटो गएर सधैँ त होइन तर प्राय: जसो देवेन्द्र घर पस्थ्यो। प्राय: जसो यसकारण कि एउटै बाटो हिँड़िरहँदा दिक्क मानेको मनले कुनै-कुनै दिन उसलाई घुमेको अर्कै बाटो घुमाएर घर पुर्याउथ्यो। यस्तो कुनै-कुनै दिन छाड़ेर माथि भनिएकै प्राय: जसो ऊ त्यही बाटो हिँड़्थ्यो। ‘त्यस’-को नाम जान्दैन देवेन्द्र। …
Page 1 of 41234	»	RecentPopularCommentsTags	तिमि जादा पराइ को डोलीमा…. हाम फालेर मर्छु म खोलिमा………मार्मिक गित भिडियो